ကူလ်ဖီးမလိုင်( စတော်ဘယ်ရီ၊ ချောကလက်၊ Pistachio ၊နို့ ) | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
ကူလ်ဖီးမလိုင်( စတော်ဘယ်ရီ၊ ချောကလက်၊Pistachio ၊နို့ )
အိသက် အမေ့ဆိုင်ကိုရောက်ရင် ပထမဆုံးစားတဲ့အချိုပွဲက ကူလ်ဖီးမလိုင်ပေါ့။ သိပ်လဲမချို သိပ်လဲမပေါ့ပဲ စိမ့်စိမ့်လေးပေါ့။ အရမ်းကြိုက်လို့ ဆိုင်မှာလုပ်ရသလိုမခက်တဲ့အလွယ်နည်းနဲ့ အိမ်မှာလုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒီလေးက အလွန်ကြိုက်ပါတယ်။ လွယ်ပါတယ်နော်။ အိမ်မှာအခုရန်ကုန်က ပို့ထားတဲ့ ကူလ်ဖီးချောင်းအခွံလေးတွေရှိပါတယ်၊ ဆိုင်သုံးတွေပါ။ အိမ်မှာလုပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့နှစ်သက်ရာ ပုံစံခွက်ကိုအသုံးပြူနိုင်ပါတယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ( ၁၀ချောင်းစာ) (စတော်ဘယ်ရီ ၃ချောင်း၊ Pistachio ၃ချောင်း၊ ချောကလက်၂ချောင်း၊ မလိုင်၂ချောင်း)
-ဆားနဲနဲ ( ဇွန်းဖျား)
– Pistachio ၅ခု ၆ခုခန့်
-နို့စိမ်း၂ဘူးနို၊့ ဆီ၁ဘူး ၊ နို့၁/၂ လီတာ၊ ဆားနဲနဲ ( ဇွန်းဖျား)အဲဒါတွေအားလုံးကို ရောကျိုပါ။ မီးမျှင်းမျှင်းနဲ့ဖြေးဖြေးကျိုရင်းပျစ်လာပါမယ်။ပျစ်လာရင် ကော်ဖီခွက်တခုချင်းစီခွဲထဲ့လိုက်ပါ။
တခွက်စီကို ခြေထားတဲ့စတော်ဘယ်ရီ ၊ ချောကလက်ကိုနွားနို့၁ဇွန်းလောက်နဲ့ဖျော်ပြီးရောပါ၊ Pistachio ကိုထောင်းပြီးရောပါ၊ နို့ကိုတော့ဒီအတိုင်းထားပါ။ ၄ခွက်ပေါ့နော်။ စတော်ဘယ်ရီ နဲ့ Pistachio က weight ပိုများလာလို့ ၃ချောင်းထွက်ပါတယ်။
အေးသွားရင် မလိုင်အပေါ်ကိုတတ်လာပါမယ်။ အဲဒီအခါကျမှဇွန်းလေးနဲ့ပြန်မွှေပြီး နှစ်သက်ရာပုံစံခွက်ထဲ ထဲ့ပြီး Freezer ထဲထဲ့ကာ အအေးခံလိုက်ပါ။ ခဲပြီဆိုရင်တော့ မလိုင်ဖတ်လေးများနဲ့ ကူလ်ဖီးချောင်းလေးများစားလို့ရပါပြီ။
30 comments on “ကူလ်ဖီးမလိုင်( စတော်ဘယ်ရီ၊ ချောကလက်၊ Pistachio ၊နို့ )”
22/08/2012 @ 7:15 pm
thank u ei thet yay sar chin nay tar kyar pyi ,lote ni lay mhya pay tar ayan ayan kyay zu tin par tal 🙂
22/08/2012 @ 7:25 pm
22/08/2012 @ 7:39 pm
Thank you naw, Ma. It seems pretty easy to make as per your recipe. I will copy yours very soon. 🙂
23/08/2012 @ 12:33 am
welcome nyi ma lay, thanks for using my website 🙂
22/08/2012 @ 11:05 pm
ကူလ်ဖီးမလိုင်က ညီမကော၊ ညီမအမျိုးသားပါ နှစ်ယောက်လုံး favourite ပဲ.. အခုလုပ်စားနည်းလေးသိသွားလို့ ကျေးဇူးပါအမ… ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ခဲတဲ့ အဲဒီကန်တော့ခွန်သံခွက်လေးတွေရှိဘူးလေအမ.. ကော်ခွက်အလုံပိတ်တွေနဲ့ကော ရလားအမ…
23/08/2012 @ 12:31 am
yes nyi ma lay. u can use anything whatever the shape or plastic or metal naw 🙂
23/08/2012 @ 12:23 am
Thanks for sharing .. Kai is very crazy with all your yummy foods !
23/08/2012 @ 12:35 am
Kai is crazy ,just because of my food 😛 joking ma. thanks for using my blog naw 🙂
23/08/2012 @ 6:05 am
23/08/2012 @ 2:48 pm
500ml pop nyi ma 🙂
23/08/2012 @ 2:56 pm
It should be 500ml. Right ? 🙂
BTW, how do you take it out from tube ? Thanks in advance Ma Ei Thet.
23/08/2012 @ 8:43 pm
24/08/2012 @ 8:49 pm
ဟုတ်မမတင်မာ အရမ်းကောင်းတယ် လုပ်စားကြည့်နော် 🙂
24/08/2012 @ 2:30 pm
ဆိုင်မှာ လုပ်တဲ့နည်းလေးလဲ အဆင်ပြေရင် ရှယ်ပါဦး အမရေ
24/08/2012 @ 8:46 pm
29/08/2012 @ 3:50 am
11/09/2012 @ 3:40 am
nyima lay…..pistachio ga…ama doe myanmar lo so ber lel hin….
16/09/2012 @ 11:12 am
မရေ စားချင်တယ် ……….
16/09/2012 @ 11:32 am
it is really easy ni ma lay . pls try naw:)
01/02/2013 @ 6:29 am
Ma Eithet, i tried to do it, but it did not turn out the way you show on the blog.
i am trying to figure it out where it went wrong. how long did I have to put the pot on the stove? also, cool down before putting into the mold? please, if you have time, i need the answer for another try. hopefully, it will work out next time.
01/02/2013 @ 3:45 pm
sis, it should be thick before u switch of the stove. and then cool down untill it is cold.
02/02/2013 @ 12:49 am
thank for your reply. i will try it again.
16/03/2013 @ 9:27 am
Would love to eat it but I cant read anything. Pls post it in english too. Will be very thankful.
17/03/2013 @ 1:20 am
ok i will do it in2days 🙂
24/07/2013 @ 1:22 pm
Pistachio ကိုမြန်မာလို ဘယ်လို ခေါ်ပါသလဲ။ သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူး။ ငြမ်းမေတ္တာ။
07/08/2013 @ 10:39 am
02/05/2014 @ 12:55 am
Where can I buy the steel mold ? I live in Florida.
08/05/2014 @ 9:06 pm
you can use any shaped mild. they r from burma 🙂
11/06/2015 @ 1:04 pm
Hi there Ma Ethet
Could you kindly explain what do you mean by your first ingredient please?
Milk2cups?
Condense milk- 1 can
Milk half L ? ( I don’t get this bit, considering first ingredient was2cups of milk ? )
Thanks in advance 👍😊
26/06/2015 @ 7:15 pm
half litre of milk is 500 ml
LeaveaReply to baby angle Cancel reply